Sawirro: Maxay safiirada Mareykanka iyo UK kala hadleen LAFTA-GAREEN? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Maxay safiirada Mareykanka iyo UK kala hadleen LAFTA-GAREEN?
Sawirro: Maxay safiirada Mareykanka iyo UK kala hadleen LAFTA-GAREEN?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, ayaa galinkii dambe ee maanta kulan xasaasi ah la qaatay Safiiradda dowladda UK iyo Mareykanka.
Kulanka ayaa waxaa looga wada-hadlay xaaladihii u dambeeyay ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amiga iyo abaaraha, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska Laftagareen.
Sidoo kale waxaa kulankaan qeyb ka ahaa oo madaxweyne Laftagareen ku wehlinayay Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Agaasimaha Madaxtooyada.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa horey u sheegay inuu ka qeybgeli doono shirka uu iclaamiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hase yeeshe markii dambe wuu bedelay go’aankiisa, sida aan ogaanay.
Laftagareen ayaa cadaadis xoog leh kala kulmay Beesha Caalamka, taasi oo keentay inuu aqbalo ka qeybgalka shirka uu hore u iclaamiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa waxaa ka qeyb-galaya madaxda dowlad goboleedyada oo dhan, ayada oo uu fashilmay isku day uu madaxweynihii hore ee Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu ku rabay in uu kala jebiyo madaxda ku mideysan Golaha.